အင်္ဂလိပ် သဒ္ဒါအပိုင်း(၁) – Present Simple | Win Naing Lay
အင်္ဂလိပ် သဒ္ဒါအပိုင်း(၁) – Present Simple
Present Simple ကို အမြဲတမ်းဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ အခြေအနေမျိုးတွေ သို့ မဟုတ် Long Term Action မျိုတွေမှာသုံးလေ့ရှိပါတယ်၊၊
ဥပမာ အားဖြင့်- ပုံမှန်လုပ်လေ့လုပ်ထရှိတဲ့အလေ့အထတွေ အဖြစ်အပျက်တွေဆိုတာ-
Present Simple ရဲ့ ထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့ Present Simple ကို အနာဂါတ်ကာလအတွက်သုံးတာပါ၊၊ အနာဂါတ်ကာလအတွက်ဆိုရာမှာ အချိန်ဇယားတွေ၊ မရောက်ရှိသေးတဲ့ နှစ်စဉ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ Events တွေကိုပြောလိုတဲ့အခါ၊ဖေါ်ပြလိုတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်။
နောက်တစ်ခါ၊စကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကျွန်တော့်တို့ ရဲ့ အတွေး၊ခံစားချက်တွေကိုဖေါ်ပြတဲ့နေရာမှာလည်း Present Simple ကိုသုံးပါတယ်၊၊ ဒီနေရာမှာ နောက်ထပ်သတိပြုစရာတစ်ခုကတော့ ဒီခံစားချက်ဖေါ်ပြမှုတွေဟာ Short -Term ဖြစ်ပြီး၊ Present Simple ကိုပဲသုံးရပါမယ်၊၊ Present Continuous ကိုမသုံးရပါဘူး၊၊
Filed under: အင်္ဂလိပ်စာ |
« Tips For Developing Skills Are YouaCarrot, An Egg, oraCoffee Bean? »
shumanyee, on October 29, 2008 at 4:33 PM said:
I like your English Grammar lesson. I would like to know how to do to improve . So please sharing English lessons more and more on your Blog.
Thanks ko james